musha More Yakasanganiswa Martial Artists Bio Francis Ngannou Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Francis Ngannou Biography inoratidza Chokwadi pamusoro peNyaya yehucheche Nyaya yake, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Musikana / Wife kuva, Hupenyu hwePamoyo, Net Kukosha uye Mararamiro.
Zvichitaurwa zviri nyore, tinokupa iwe neakasanganiswa rwendo rweupenyu rwemurwi wetsiva, kubva pamazuva ake ekutanga, kusvika paakava nemukurumbira.
Kuti akudze chishuwo chako chehupenyu hwehupenyu, heino hudiki hwake kune vanhu vakuru gallery - pfupiso yakakwana yaFrancis Ngannou Bio.
Francis Ngannou Biography - Tarisa Hupenyu Hwake hwepakutanga uye Kukura Kukuru.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye anotonga UFC Heavyweight Champion (sa2021). Nekudaro, vashoma chete vanhu vanoziva nezvedambudziko raakasangana naro asati abudirira. Pasina zvakawanda ado, ngatipe chikafu chako chekuda kuziva neBiography yake inonakidza.
Francis Ngannou Yemwana Nhau:
For Biography starters, many fans call him by the nickname “The Predator”. Francis Ngannou akazvarwa pazuva re5th raGunyana 1986 kuna baba vake naamai veCameroonia kuBatie, Cameroon.
Akauya pasi pano seyechitatu pavana vashanu vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake. Pazasi payo panonakidza pikicha yemakore matatu ekuberekwa Francis nababa vake naamai.
Sangana nemusikana Ngannou mudiki nevabereki vake apo zvese zvinoita senge zviri kushanda mushe.
Kufanana nemwana mudiki wese, muenzi anouya ainakidzwa nekupedza nguva nevabereki vake. Kare kumashure, baba vake vaive nembiri inotyisa yekupinda mumakakatanwa mumigwagwa.
Zvinosuruvarisa, zviito zvake zvakakonzera matambudziko mazhinji kuna Francis mudiki, uyo aifanira kutsungirira kusekwa kwevanhu kwakaitwa nababa vake.
Akurudzirwa nechishuwo chakasimba chekutsiva kutadza kwababa, Francis akafunga kuita hupenyu hwetsiva. Zvirinani, aifunga kuti kushandisa simba rake mumitambo inzira yakanaka yekushandisa simba rake.
Hwechidiki hwehuuya hweMMA icon hwaisave hwakasimba nguva dzose. Pa6, vabereki vake vakarambana paakatumwa kunogara natete vake. Zvinosuruvarisa, pfungwa dzake diki dzaisakwanisa kunzwisisa dambudziko rese iri.
Mushure menguva yakati rebei, Francis akadzoka kumba kunogara naamai vake nevanin'ina vake. Nekutenda, mukomana mudiki akasuwa akatanga kufara zvakare zvaakapedza imwe nguva nemhuri yake.
Unoziva here?… Zvikwata zvemunharaunda yake zvakamunyengetedza kuti abatane nazvo. Zvisinei, kuedza kwavo hakuna zvakwakabatsira.
Francis Ngannou Nhoroondo Yemhuri:
Kutevera kurambana kwevabereki vake, amai vaFrancis vakapiwa basa rekupedzisira rekuvapa zvavanoda. Ino nguva yakatenderedza, mhuri yake haina kunetseka nekuora mwoyo. Asi, kurwa kwavo kwaipesana nehurombo.
Zvaive zvakasuruvarisa kuti veimba yake vaisakwanisa kana kudya chikafu chamangwanani kana kutotanga. Vakanga vari panguva yavo yakaipisisa.
Kunyangwe nhengo yega yega yemhuri yavo yakabatanidzwa mune rimwe basa rakaderera kana rimwe racho, zvaive zvisina kukwana kuvabatsira kubuda mudambudziko ravo rezvemari.
Mhuri yaFrancis Ngannou Akatangira:
Iye ane tarenda murwi chizvarwa cheBatie. Nyika yokumusha kwake iri kumadokero kwedunhu reCameroon uye ingangoita 208 km kubva kuguta guru renyika (Yaounde). Batie inozivikanwa neiyo MTN Elite kirabhu imwe (Sable FC).
Kwese kwaanozviwana iye, anogara achizvikudza kuzvizivisa nenyika dzamadzitateguru ake.
Nekudaro, Francis haana kupa hanya nhabvu. Asi, aida kushandisa simba rake kuti abudirire uye mukurumbira mumutambo wetsiva.
Francis Ngannou Dzidzo uye Basa Rinovaka:
Sezvambotaurwa, chikara chakakurira mumusha une hurombo. Nekuda kwemamiriro emari yemhuri yake, Francis nevanin'ina vake vanowanzo famba kwemaawa maviri netsoka kuenda kuchikoro. Dzimwe nguva aisakwanisa kugara kusvika kupera kwekirasi yake asati amhanya kumba nekuda kwenzara.
Zuva roga roga raipfuura raitaridza kunge raive nerakaipisisa kumukomana mudiki uyo akatanga kushanda panzvimbo yejecha pa10.
Kunyangwe aive mudiki kwazvo, Francis akashanda nesimba sevamwe vanhu vakuru kuti awane mari nekutsigira fundo yake. Zvichida basa rose rakaomarara rakamupa simba rake rinoshamisa pamusoro pemakore.
“Ndakanga ndine makore gumi ekuberekwa apo ndakatanga kuchera mumusha. Kunyangwe basa racho raiitirwa vanhu vakuru, ini ndakanga ndisina imwe sarudzo. Zvese zvatakaita kutora izvo zvatapihwa. ”
Francis Ngannou Upenyu Hwekutanga Hupenyu:
Kwemakore manomwe, Cameroonia yakachera jecha uye inopwanya marara akasiyana mukutsvaga chikafu.
Zvinosuruvarisa, mari yaFrancis yakanga isisakwanise kubhadhara mari yake yechikoro. Nokudaro, akarega chikoro ndokutora mabasa akasiyana-siyana kuti ararame.
Muna 2008, murwi ane tarenda akatora danho rekusatya kuti azadzise kurota kwake. Akatengesa mudhudhudhu wake kuti apinde mujimu yetsiva.
Ehe, vazhinji vezera rake vakaseka zviito zvake uye vakamutumidza mazita. Vamwe vakatofunga kuti akange openga sezvo achishingisa kutengesa kwake kukuru sosi yemari.
Iyo genesis yemafambiro eartial artist.
Francis Ngannou Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Sokunge kuti denga rakanga riri mumakwikwi achipesana nekubudirira kwake, Ngannou akarwara zvakanyanya uye akatadza kuenderera mberi nekudzidziswa mushure megore.
Paakazosvitsa makore 26, akabva asiya nyika yake, izvo zvaita kuti arwadziwe uye ashungurudzwe.
Ehezve, kwake kwekutandarira kwaive kuenda kuEurope kuburikidza nekutama zvisiri pamutemo. Pakutsvaga kwake, Ngannou akasangana nezvipingamupinyi zvakawanda uye akange aine nhevedzano yezviitiko zvekuda kufa. Nekudaro, haana kukanda mapfumo pabasa rake kudzamara azosvika kuFrance.
Pfupiso yematambudziko ake apo iye achivavarira kunetsa Hupenyu hwake.
Achingofamba-famba mumigwagwa yeParis, chikara chakasangana nevamwe vake, Fernand Lopez, uyo akamuzivisa iye kufekitori yeMMA.
Kunyangwe Ngannou aida kuita basa retsiva nekuti anonamata Mike Tyson, shamwari yake nyowani yakamukurudzira kuti aedze MMA. Nekudaro, akarara uye akadzidziswa mune yekurovedza mahara.
Sangana naFernand Lopez, wekutanga shamwari yechokwadi, uye murairidzi wePredator.
Francis Ngannou Biography - Kumuka Mukurumbira Kubudirira Nhau:
MunaNovember 2013, chikara chakatanga basa rake reMMA. Kare kumashure, akarwa mudunhu neFrance kukwidziridzwa, uko kwaakazviitira mukurumbira.
Mushure mezvo, Ngannou akasaina kondirakiti neUFC uye akaita nharo naLuis Henrique muna Zvita 2015. Zvinotoshamisa kuti akahwina kurwa muchikamu chechipiri kuburikidza nekugogodza.
Sezvo ini ndichinyora iyi Bio, chikara chakakunda vazhinji veUFC veteran varwi, kusanganisira alistair overeem. Pa 27 yaKurume 2021, iye zvine utsinye anogogodza Stipe Miocic kuti atore zita reheavyweight. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Francis Ngannou Musikana uye Wife kuva:
Zvinowanzo taurwa kuti kuruboshwe rwemurume ane simba anomira mukadzi ane simba anomusimbisa nehunhu hwake. Ehezve, murwi asingakundwe anga achingobatanidzwa muhukama humwe chete hwatinoziva nezvazvo.
Fans vane minwe yavo yayambuka mukutarisira kuona musikana wake mune ramangwana riri pedyo.
Runyerekupe rune kuti musikana waNgannou ndiMiesha Tate. Nekudaro, mukwikwidzi weUFC haana kutaura pachena nezve hukama hwehukama hwake.
Pamwe haadi kunyatsotarisirwa kupihwa musikana wake. Isu tinofungidzira kuti anosarudza kuramba ari kunze kwenzvimbo yemukurumbira wake.
Chii chinoita kuti maMix Martial Artists ave makobvu?… Chekutanga uye chikuru, ane musanganiswa weVirgo zodiac maitiro. Sezviri pachena, ane hanya zvakanyanya uye anozvininipisa. Kufanana Kaini Velasquez, Ngannou anoda kuzorora mudziva rekushambira.
Iko hakuna kunzwa kuri nani pane kutonhodza tsinga dzake mudziva mushure memusangano wakasimba wekudzidzisa.
Sezvineiwo, anofarirawo nhetembo nemumhanzi. Iwe waigara uchimuona achimaka pamwe chete neyemusoro wake, kunyangwe pamazuva emitambo. Moreso, ane ziso rezvakaringana mutinhimira uye nziyo dzakanaka.
Iye zvechokwadi haaparadzanisike kubva kumusoro kwake. Zvichida kuteerera mimhanzi inonakidza kunoita kuti arambe achikurudzirwa.
Francis Ngannou Mararamiro:
Hapana munhu angafungidzira kuti mukomana uyo vazhinji vaimuti "anopenga" kumashure mumazuva anozopedzisira awana mari inosvika kumadhora zviuru zviviri nemazana mashanu nemazana mashanu ezviuru mukuedza kwake. Kubva muna 2,157,500, Francis Ngannou akaunganidza mari inofungidzirwa yeNet Worth ye $ 2021 mamirioni.
Ehe, mukomana murombo anobva kumabhuru ikozvino anonakidzwa nehupenyu hwoumbozha hunoonekwa nemota dzake dzekunze nedzimba dzakanaka.
Kunyemwerera pachiso chake kunotsanangura rufaro rwake rwakadzama rwekuputsa mikana yehurombo. Munoona, ane akati wandei emota.
Francis Ngannou Hupenyu Hwemhuri:
Kune mukwikwidzi weUFC, kusarongeka kwehupenyu hwemhuri inzvimbo yakakomborerwa inomutendera kuti ave akanakisa iye achitsvaga zvakanyanya.
Ehezve, chishuwo chake chisingaperi chekutsigira imba yake hachinzwisisike. Nekudaro, isu tinokupa iwe neruzivo rwakakwana nezvevabereki vake, vanun'una, uye hama.
Nezve Baba vaFrancis Ngannou:
Panzvimbo pekuve chidhori icho mukomana wake mudiki aigona kutarisa kwachiri, baba vaNgannou vakawedzera kuita mhirizhonga. Ndangariro chete dzaakasiira vana vake dzaive dzehunhu hwake hwechisimba.
Sangana nababa vake, uyo asina kumbomira kuti afarire kubatsirwa kwake kubudirira.
Zvinoita sekuti baba vaFrancis vaive munhu aimhanya mhanya uye anoda kushandisa simba rake nenzira yehutsinye.
Anogara achirova vana vake naamai vavo uyewo anorwa mumigwagwa. Yakanga iri hunhu hwake hwekushungurudza hwakaita kuti arambane nemukadzi wake apo Ngannou aive nemakore 6 chete.
Nezve Amai vaFrancis Ngannou:
Iye mumwe munhu anga apfuura negehena kusimudza chikara uye vanun'una vake ndiamai vake.
Kuzvipira kwake kuti ave nechokwadi chekuti akapona kumatambudziko akasangana nemhuri yavo hakugone kusimbiswa. Nekuda kwekusimuka kwaNgannou mukurumbira, amai vake vanogona kunakidzwa nehupenyu huri nani husina hurombo.
Sangana naamai vaFrancis Ngannou. Chokwadi, amutorera kutarisa kwake.
Nezve hama dzaFrancis Ngannou:
Mukutarisana nenhamo, kazhinji kazhinji akatendeukira kuhama dzake huru nokuda kwenyaradzo. Hongu, Francis ane vanun'una vatatu nehanzvadzi. Pamwe chete, vose vakatamburira kurarama upenyu hwavo hunotyisa hwouduku.
Anoda kuita ndangariro inofadza nehama dzake chero nguva paanoshanyira imba yake.
Mumwe wevanun'una vake vakuru akave makanika kuti atsigire mhuri yavo uku Ngannou achitarisa zvizere pahunyanzvi hwehondo.
Mushure mekubudirira kwake muUFC, akatengera mukoma wake rori, izvo zvinomuisa pamurairo wepamusoro webhizimisi rejecha.
Tarisa rori iyo Ngannou yaakatengera mukoma wake wedangwe, achangoti simukira mukurumbira.
Sezvo ini ndichiunganidza iyi Bio, iye akarasikirwa nasekuru nasekuru vake kune anotonhora maoko erufu. Zviripachena, vangadai vaidada nezvaakaita dai vaive vapenyu nhasi. Ngannou ane babamunini (Maurice) vane makore makumi manomwe nematatu ekuberekwa (sa73).
Chikara chakabvuma babamunini vake semumwe wevanhu vakamukurudzira murwendo rwehupenyu hwake.
VaMaurice vanga vari bhandi dema rekarati 2nd Dan kubvira 1980. Moreso, anga ari bhandi reJudo brown kubvira 1974.
Kunyangwe zvakawanda zvisati zvambotaurwa nezvevamwe vehama dzake, vari kufara chaizvo nekubudirira kwake kusvika pari zvino.
Francis Ngannou Chokwadi:
Kuputira iyo yakavhenganiswa yemartial artist's Bio, heano mashoma echokwadi nezvake izvo zvingakubatsire iwe kuti uwane ruzivo rwakazara rweHupenyu Hwake Nyaya.
Panguva yekutama kwake kuEurope zvisiri pamutemo, parwendo rwake paive nekumira kwakati wandei.
Kutanga, aifanira kunwa mutsime rakasviba raiva nemhuka dzakafa pashure pokunge ayambuka gwenga reSahara achienda kuAlgeria. Mushure mezvo, mutumbi wake wakachekwa newaya ine minzwa.
Pazviitiko zvitanhatu zvakasiyana, akadonhedzwazve mugwenga sezvo kuedza kwake kwose kwakavhiringidzwa.
Akabva atamira kuMorocco, kwaakaisa pfungwa dzake dzokupinda muSpain. Zvinosuruvarisa, akaiswa mujeri kwemwedzi miviri kuSpain nokuda kwokuyambuka muganhu zvisiri pamutemo negungwa.
Pasina panikiro, inyanzvi yokurwa yakaisvonaka. Nekudaro, Ngannou angangozviitira zita rakakura muHollywood. Ehe, acharatidza muFast and Furious 9 bhaisikopo, iro richaburitswa muzhizha ra2021.
Hunhu hwake hunofanirwa kucherechedzwa muThe Fast uye The Furious 9.
Chokwadi # 3: Kusingaperi Patriotism:
Chimwe chinhu chinonakidza nezve Bio yake rudo rwake rusingaperi rwe nyika yake. Kunyangwe ane hupfumi hwakawanda, Ngannou achiri kushanyira guta rekumusha kwake uye achidya zvavo zvekudyira mumigwagwa sezvaaimboita asati ave mupfumi.
Nguva dzinoverengeka, akapfeka zvipfeko zvake zvekuzvarwa kune zviitiko zvikuru uye mhemberero dzemubairo.
Kana zvasvika pakuda nyika, Ngannou anowanzo tungamira. Iye haaregeredze chero chinhu chingaratidza kushamwaridzana kwake nababa vake.
Francis Ngannou muKristu anotenda kuti varume havagone kurarama vasina hupenyu hwemweya. Chokwadika, nyajambwa anowanzova nechokwadi chokuti anogara pasi pemitemo yake yechitendero.
Chimwe chinhu chinonakidza pamusoro peNgannou ndechekuti haafarire inking. Nekudaro, haana kunyora tattoo pamuviri wake.
Chekupedzisira, budiriro yaNgannou chimwe chinhu icho vezera rake vasingatombo nzwisisa. Kunyangwe pahurema hwese uye nemamiriro ezvinhu anotyisa emari, haana kutendera matambudziko ake kutadzisa kuona zviroto zvake. Kunyange ESPN akabvuma kusimba kwake pamberi pechiitiko chake chikuru muMMA.
Nekutenda, aivewo naamai vake nedzimwe nhengo dzemhuri vaitenda maari. Nekudaro, apo rwendo parwakawedzera kuoma, kufunga kwekusunungura vanin'ina vake naamai kubva muhurombo kwakamuramba achienderera.
Zvichida, dai baba vake vaivepo kuti vatsigire zvaaiedza kuita, angadai akawana zvakawanda kana kutora rimwe basa rakasiyana.
Tinokutendai nekuverenga kwedu Francis Ngannou Biography. Nomutsa taura nesu kana iwe ukawana chero chinhu chinoita senge chakashata nenyaya yedu.
Zita rizere: Francis Ngannou
Zita rekudanwa: The Predator
Nzvimbo yekuzvarirwa: Batie, Cameroon
Vanun'una: 3 Hama nehanzvadzi yechidiki
Musikana / Wife kuve: Miesha Tate
kukwirira: 1.93 m (6 ft 4 in)
Weight: 119 kg (263 lb)